ह्वात्तै बढ्यो कोरोना सङ्क्रमणको दर, ओमिक्रोन भेरियन्ट रोक्न यस्तो छ सरकारको तयारी ?
पौष २८ २०७८
काठमाडौँ : कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरियन्ट यसअघिको डेल्टा भेरियन्टभन्दा बढी सङ्क्रामक रहेको बताइएको छ । ओमिक्रोन भेरियन्टले मानिसको स्वास्थ्यमा जटिलता कम गराए पनि सङ्क्रामक दर गुणात्मक रुपमा फैलिने बताइएको छ ।
ओमिक्रोनले कोरोना खोप लगाएकारनलगाएका दुवैलाई सङ्क्रमण हुन सक्दछ । सङ्क्रमित भएकामध्ये खोप नलगाएकालाई धेरै गा¥हो बनाउन सक्ने अहिलेसम्मको अध्ययनले देखाएको छ । खोप नलगाएका व्यक्तिको ज्यान जाने पनि खतरासमेत रहेको छ । जनस्वास्थ्यविद् डा सागरराज भण्डारीले ओमिक्रोन भेरियन्टले मानिसको घाँटीमा सङ्क्रमण गराउने बताए ।
यस्तै सङ्क्रमणबाट बच्नका लागि सरकारले १८ वर्षदेखि माथिका सबैलाई कोरोनाविरुद्धको खोप एक वर्षअघिदेखि नै लगाउन थालेको छ । अहिलेसम्म नेपालमा लक्षित जनसङ्ख्याको ७६.५ प्रतिशतले पहिलो मात्रा र ५६.९ प्रतिशतले पूर्ण मात्राको खोप लगाएका छन् ।
यस्तै कूल जनसङ्ख्याको ५०.२ प्रतिशतले पहिलो मात्रा र ३७.३ प्रतिशतले पूर्ण मात्राको खोप लगाएका छन् । सरकारले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढदै गएपछि आगामी माघ १५ गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्नुका साथै २५ जनाभन्दा बढीको उपस्थिति हुने सभा, गोष्ठी जस्ता कार्यक्रम बन्द गरेको छ ।
“एस–जिन नेगेटिभ बढ्नु भनेको ओमिक्रोन भेरियन्ट बढ्नु हो”, उनले भनिन्, “एस–जिन नेगेटिभ पत्ता लागेका सबै सङ्क्रमितको कन्याक्ट्र टे«सिङ गरिरहेका छौ ।” यस्तै सीमा नाकामा एक हजार क्षमताका नौ वटा होल्डिङ सेन्टरसमेत बनाउन थालिएको छ ।रासस
काठमाडौं उपत्यकामा आजदेखि नयाँ नियम लागू, के गर्न पाइन्छ के पाइदैन ?
प्रदेश २: ह्वात्तै बढ्दै कोरोना संक्रमित, मुख्यमन्त्री राउतले दिए यस्तो निर्देशन
आजदेखि सिंहदरबार प्रवेशमा कडाइ, यसअघिका सबै प्रवेश पास खारेज
डब्ल्युएचओले दियो २ महिनाभित्र युरोपको आधा जनसंख्या ओमिक्रोनको चपेटामा पर्नसक्ने चेतावनी